Global Voices teny Malagasy · admin – Oktobra 2017
admin · Oktobra, 2017
Lahatsoratra farany an'i admin tamin'ny Oktobra, 2017
Amerika Latina31 Oktobra 2017
Katalàna : Anelanelan'ny Fanantenana sy Fahavinirana Taorian'ny Fitsapan-kevibahoaka Ho An'ny Fahaleovantena
Eoropa Andrefana30 Oktobra 2017
Eo anelanelan'ireo fijoroana vavolombelona sy sarinà fanantenana sy herisetra, miatrika ny iray amin'ireo fizotran-draharaha sarotra indrindra sy hametra ny hoaviny amin'ny tantara demokratikany maoderina i Espaina sy i Katalàna.
Bilaogin'ny Skoto Shiliana
Nisy tao Shily nandritra ny 96 taona ny hetsika Skoto. Manana mpitarika mampiroborobo sy mizara ny soatoavina ara-tsosialin'ny fikambanana ity vondrom-piarahamonina amin'ny tambajotra ity. Amin'izao fotoana izao, tanora maherin'ny 70.000 no mandray anjara ary olon-dehibe 11000 no milatsaka an-tsitrapo ao amin'ny fivondronana skoto 850 manerana an'i Shily.
Fampitàm-Pampianarana Amin'ny Alalan'ny Bilaogy
Manome hery ho an'ireo mpampianatra, izay tafasaraka amin'ny jeografian'i Shily ireo blaogy miditra amin'ny sehatry ny fanabeazana, mba hifaneraserana amin'ny fomba izay tsy dia azo natao teo aloha.
Amerika Latina29 Oktobra 2017
Ny ankamaroan'ny kabary ara-politika dia momba ny demokrasia ifarimbonana, saingy nahoana izy ireo no tsy mampiasa bilaogy ho sehatry ny politika ifarimbonana?
Bilaogy Vaovao Ifarimbonana, Feo Shiliana Vaovao
Teraka tamin'ny herinandro lasa teo tany an-tanànan'i Arica ny bilaogy vaovao ifarimbonana voalohany ao Shily, “El Morrocotudo”. Efa nahasarika fisoratana anarana 200 avy amin'ny faritra rehetra any Shily ny bilaogy natsangana vao haingana.
Fitsidihana Vetivety An'i Shily
Amerika Latina27 Oktobra 2017
Fomba tsara hanaovana fitsidihana virtoaly an'i Shily ny mahafantatra ireo bilaogy Shiliana momba ny sakafo, ny fomba amam-panao sy ny kolontsaina.
Mibilaogy Ny Hezbollah Iraniana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana27 Oktobra 2017
Marolafy tanteraka ny tontolon'ny bilaogy Iraniana izay ahitana bilaogy mavitrika an'arivony. Ao anatin'ireo bilaogy ireo, afaka mahita bilaogy pro-demokratika sy liberaly ary koa ny pro-Repoblika Islamika isika. Ny ankamaroan'ireo bilaogy pro-Repoblika Islamika dia miantso ny tenany ho bilaogy Hezbollah.